ဘယ်လိုကအင်တာနက် Porn လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်သင်ျခြိုပြုလုပ်ခြင်းသည်။ သင်ျခြိုသြစတြေးလျ, Alinda အသေးစား (2016) ၏လိင်ကုထုံးနှင့်တွဲဖက် - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနောက်ကွယ်ကသိပ္ပံမှာတစ်ဦးကကြည့်။
03 / 06 / 2016 6: 26 AM AEST | နောက်ဆုံးရေးသားချိန် ဇွန်လ 21, 2016 12: 39
အမ်မလီ Blatchford တွဲဘက်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အယ်ဒီတာ, HuffPost သြစတြေးလျ
PIED အတိုကောက်ကိုတွေ့ဖူးပါသလား။ ဆိုလိုတာက 'porn သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ်'' ဒါကသြစတြေးလျလူငယ်လေးတွေကိုထိခိုက်နေတဲ့အခြေအနေပဲ။
တကယ်တော့, ဆက်ဆံရေးအကြံပေး, လိင်ကုထုံးနှင့် Impotence သြစတြေးလျ၏တွဲဖက်, Alinda Small, တိုးအပေါ် PIED ၏ဖြစ်ရပ်များမသာသူမသူမ၏ဆစ်ဒနီမှာအများဆုံးဆကျဆံသောအရာဖြစ်တယ် ပုဂ္ဂလိကအလေ့အကျင့်.
“ Porn-induced erectile disfunction ဟာအခုအချိန်မှာငါမြင်နေရသမျှထဲမှာအကြီးမားဆုံးတင်ဆက်မှုပဲ” ဟု Small က The Huffington Post Australia သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ "ကျွန်တော်မြင်နေတဲ့ယောက်ျားတော်တော်များများဟာညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုကြောင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပြhavingနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ "
ဒီတော့ PIED ကဘာလဲ?
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြောင်းပြောပါရစေ။ ED ဆိုတာလူတစ်ယောက်မရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ် လိင်ဆက်ဆံဘို့အလုံအလောက်တစ်ခုစိုက်ထူကုမ္ပဏီတခု။ အဲဒီမှာရှိနိုင်ပါသည် မြောက်မြားစွာအကြောင်းရင်းများ လူတကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်အပါအဝင် ED (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်မျိုးလုံး) ရှိစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ရန်အဖြစ်။
တစ်ဦးမျှမျှတတမကြာသေးမီဖြစ်ရပ်ဆန်းသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများ, တစျခု, ဆွဘို့အအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအပေါ် over-မှီခိုဖြစ်ထင်နေသည်။ ဤသည် PIED ဖြစ်ပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့မှာအခြေအနေတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ ယောက်ျားမျိုးဆက်တစ်ခုလုံးဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်နေတဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီ" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏အခြေခံစနစ်များ - ဆုလာဘ်စနစ် - ကိုအမှန်တကယ်လည်ပတ်ပုံကိုပြောင်းလဲပေးသည်။
“ အပျော်အပါးကိုမျှော်လင့်ရတာအရမ်းမြင့်မားတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်။ တကယ့်ဘဝအဖော်အဖက်နဲ့သာမန်လိင်ဆက်ဆံမှုကအဲဒီလိုခံစားမှုမျိုးမပေးပါဘူး။
“ အခြေခံအားဖြင့်၊ သင့်မှာ 'ဝတ္ထု' အကြောင်းတစ်ခုရှိရင်သင့်ရဲ့ dopamine ပမာဏသည်ကန်ရလိမ့်မယ်၊ ပြီးတော့ porn ကအားလုံးရဲ့အဓိကဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်တယ် "ဟု Small ကပြောသည်။
"သင်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့ porn ပို။ ပို။ အစွန်းရောက်လာ, ဒါကြောင့်လူများကအပေါ် ante တိုးမြှင့်စတင်ပါ။
“ အပျော်အပါးကိုမျှော်လင့်ရတာအရမ်းမြင့်မားတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်။ တကယ့်ဘဝအဖော်အဖက်နဲ့သာမန်လိင်ဆက်ဆံမှုကအဲဒီလိုခံစားမှုမျိုးမပေးပါဘူး။ အထူးသဖြင့်ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်ရေရှည်ရည်းစားနှင့်အတူရှိနေသောအခြေအနေမျိုးတွင်၎င်းသည်ဝတ္ထုကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။
“ ကိစ္စတော်တော်များများမှာတော့သူတို့ကအဲ့ဒါထိမှန်ခဲ့လို့တစ်ယောက်တည်းလှည့်လည်ချင်ကြတယ်။ ”
အမှန်တကယ်၊ လက်တွေ့ဘ ၀ လိင်ကိုကြည့်ရှုရန်ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိလိင်ဆိုင်ရာဇာတ်လမ်းများကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်ဟုသင်ထင်ပါကအသေးစားကပြောကြားသည်မှာ၎င်းတွင်ရရှိနိုင်သော၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ မတူကွဲပြားမှုများနှင့်အလွန်များပြားသောပမာဏသည်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အလွန်များသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
"တကယ့်ဘဝဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကဇာတ်လမ်းပေါင်း ၂၀ ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းမတူညီတဲ့ဇာတ်လမ်း ၂၀ ကိုရိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး" ဟုစမစ်ကပြောကြားသည်။
ပြီးတော့ငါတို့ကတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကနေတစ် ဦး အပေါ်တစ် ဦး pissing လုပ်တာအထိပြောနေတာပဲ။ ကြည့်ရှုသူရဲ့ ဦး နှောက်ဟာ overdrive ထဲကိုရောက်သွားတယ်။
“ ရုပ်ပုံတစ်ပုံအစားမင်းမှာငါးခုခြောက်ယောက်ရှိတယ်၊ ပြီးတော့ဒီဒဏ်ရာကိုစွဲသွားပြီ။
ဝမ်းနည်းစရာကတကယ့်ဘဝလက်တွဲဖော်တစ်ယောက်နဲ့အတူသင်အဲဒီလိုအလျင်စလိုမရ။ တကယ်တော့ဒါဟာအရမ်းကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ”
ညစ်ညမ်းသိသာအသက်အရွယ်အဘို့အလှည့်ပတ်ခဲ့သျောလညျး, အင်တာနက်ကိုဝယ်လိုအားများလုံးဝအသစ်သို့အဆင့်ဆင့်အတွက်ကဏ္ဍထားပြီး, ထိုသို့မြင့်တက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဤမျှလောက်များစွာသောယနေ့လူ porn ကိုရယူသုံးနေကြသောကြောင့်, တကယ်တော့က porn စက်မှုလုပ်ငန်းအောင်သည်အကြံပြုထားသည် ပေါင်းစပ်အားလုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားထက်ပိုပိုက်ဆံ.
"အခုအချိန်မှာတော့စွဲလမ်းမှုဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့ပြisနာပါ။ “ လူငယ်တွေအတွက်အထူးသဖြင့်ကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ [အွန်လိုင်းပေါ်မှညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုခြင်း] ဟာသူတို့သိသမျှပဲ။
ဥပမာ၊ ငါကြည့်နေသောအမှုသည်တစ်ယောက်သည် ၂၃ နှစ်အရွယ်အပျိုဖြစ်သည်။ သူကထိုးဖောက်နိုင်သည့်အထိတိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး၊
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူး။ ယောနိသည်ယောနိကိုမည်သို့ခံစားရမည်ကိုသူမသိရှိပါ၊ ၎င်းသည်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသိသမျှအားလုံးသည်သူအွန်လိုင်းပေါ်တွင်မြင်တွေ့နေရသည့်အရာဖြစ်သည်။
“ အမှန်တရားကတော့လိင်ဟာပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးရှုပ်ထွေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်တဲ့အခါသူတို့မမြင်ကြဘူး။ ၎င်းသည်chုံကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြီးပြီးပြည့်စုံစွာနှင့်မိန်းမသည်အပျော်အပါးလိုက်စားနေသည်။
PIED အပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်သုတေသနပြုတစ်ခုခံရဖို့သေးပေမယ့် ကျွမ်းကျင်သူတိုးပွားလာ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့်သူတို့ခေတ်သစ်နေ့ရက်ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကိုယ်စားပြုပြဿနာတွေအသိအမှတ်ပြုကြသည်။
အသေးစားယခင်ကပေါ်ထိမိကဲ့သို့၎င်း, porn စွဲ pair တစုံဘွန်းနဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့်အကျိုးဆက်အဖြစ်နိုငျသောဖွံ့ဖြိုးဆဲသိပ္ပံနည်းကျယုံကြည်ချက်ရှိ သုတေသနတစ်ခုအရလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှုနည်းပါးခြင်းမှာအလွန်ထိတွေ့ခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်သွေးလှည့်ပတ်မှုစနစ်နှင့်၎င်းလုပ်ဆောင်ပုံကိုပါအကျိုးသက်ရောက်ပုံရသည်။ ရလဒ်တစ်ခုသည်ကလစ်တစ်ချက်တည်းဖြင့်မကုန်ခန်းနိုင်သည့်အသစ်အဆန်းများကိုအလွယ်တကူရယူရန်မည်မျှလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တိုတိုမှာတော့သိပ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပြီး,, အသေးစားရေးသားခဲ့သည်အဖြစ် လတ်တလောဘလော့ဂ်အတွက်“ အင်တာနက် download အားလုံး၏ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဤနေရာတွင်ဆက်လက်ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အနာဂတ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြောင်းပိုမိုသိရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ ”
အသေးစားအဆိုအရ, porn-သွေးဆောင် ED ရှိစေခြင်းငှါတဲ့သူတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြီးမားဆုံးပြဿနာများကိုများထဲမှသူတို့မကြာခဏကအကြောင်းပြောဆိုရန်ငြင်းဆန်သည့်အချက်ဖြစ်ပါသည်။
“ ပြTheနာကလူအများစု၊ အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအကြောင်းမပြောတတ်တာပဲ။ “ သင့်မိသားစုဆရာဝန်ကိုသွားပြီးတင်ပြဖို့သတ္တိရှိဖို့လိုတယ်၊ ဒါကလူတွေလုပ်လေ့ရှိတယ်။ မိသားစုဆရာဝန်သည်လိင်ကုထုံးအချို့ကိုပေးကောင်းပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းယောက်ျားများသည်အချိန်အတန်ကြာတောင်းရန်သတ္တိမရှိပါ။
"ဒါဟာလူ့သဘောသဘာဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ အမျိုးသားများက၎င်းကိုသူတို့၏ရဲစွမ်းသတ္တိကိုရောင်ပြန်ဟပ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပုဂ်္ဂိုလ်အားလုံးမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုတင်ပြခြင်းနှင့်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်တာကို ၀ န်ခံခြင်းဟာကောင်းပါတယ်။
“ သင်ကလက်တွဲဖော်တစ်ယောက်၊ အထူးသဖြင့်လူမတူတဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်နဲ့အတူရှိနေရင်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ "အမျိုးသမီးများကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရယူပါ။ သူတို့ဟာသူတို့ဟာလုံလောက်တဲ့ sexy မဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကြတယ်။
“ ဒါနဲ့မနေပါနဲ့ သင်ကိုယ်တိုင်ကျော်လွှားနိုင်သည့်အရာမဟုတ်ပါ။
အသေးစားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီနဲ့ထွက်ရှာအံ့သောငှါသင့်ပါတယ်သူတို့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူအချို့သောကိစ္စများရှိစေခြင်းငှါသက်ဆိုင်ရာနေသောသူတို့ကိုအကြံပြုသည်။
"သင်၏မိသားစုဆရာဝန်ကိုသွားပါသို့မဟုတ်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်လိင်ကုထုံးကိုသွားတွေ့ပါ။ " "ကျနော်တို့ကနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာလိင်နှင့်အတူကိုင်တွယ်။ တရားစီရင်မှုဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူး၊ အဲဒါကိုငါတို့အမြဲမြင်နေရတယ်။
“ ပထမ ဦး ဆုံးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှာသတ္တိရှိဖို့အရေးကြီးတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ရွေးချယ်စရာတွေရှိနေလို့ပါ။
“ ဒါနဲ့မနေပါနဲ့ သင်ကိုယ်တိုင်ကျော်လွှားနိုင်သည့်အရာမဟုတ်ပါ။ မင်းအခန်းထဲမှာစာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်တာကအဲဒါကိုကျော်လွှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ”